Mpanamboatra mosara sy mpamatsy - China Handkerchief Factory
Stitch hazo fijaliana
Namboarina manokana amboradara napetraka D ...
Soso-tànana misy fehin-kofehy miloko vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy feno kofehy vita amin'ny volony 513500
Soso-bidy mafana (Manitra sy be loatra) Thread Embroidered Diy Embroidery Kit mampiasa tanana - vita amboradara telo-habe, avelao ny tanana hamoaka ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-kofehy miloko vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny haingon-trano, Hanky ​​513501
Soso-bidy mafana (Model brocade blue) Kit ny peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana - vita amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao ny fihetsehamponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-tsokosoko miloko vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny haingon-trano, Hanky ​​513502
Soso-bidy mafana-mivarotra (Mavola brocade maodely) Kitaro peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana - vita amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao ny fihetsehamponao Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-tsokosoko miloko vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny haingon-trano, Hanky ​​513503
Soso-bidy mafana (Model brocade green) Kit ny peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana - vita amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-tsokosoko miloko vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny haingon-trano, Hanky ​​513505
Soso-bolo mafana (chrysanthemum) mivarotra kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita tanana - nanao amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao ny fihetsehamponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-tsokosoko miloko vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny haingon-trano, Hanky ​​513506
Soso-bidy mafana (Bud feno rantsana) Kit ny peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana - vita amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao izay hampiseho ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-tsokosoko miloko vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny haingon-trano, Hanky ​​513507
Soso-bidy mafana (ravina maple mena) Kitapo misy peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana - vita amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao ny fihetsehamponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-tsokosoko miloko vita amin'ny peta-kofehy feno kofehy vita tamin'ny Hanky ​​Ladies 513508
Soso-bidy mafana (ravina maple mavo) Kitaro peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana - vita amboradara telo refy, avelao ny tànana hamoaka ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-tsokosoko miloko vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny haingon-trano, Hanky ​​513509
Soso-bidy mafana (voninkazo plum) kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy nampiasa tanana - nanao amboradara telo refy, avelao ny tànana hamoaka ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-tsokosoko miloko vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny volony 513510
Soso-bidy mafana (cluster voninkazo) kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tànana vita amin'ny kofehy vita amin'ny telolafy, avelao ny tanana hamoaka ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
Soso-tànana misy fehin-kofehy miloko vita amin'ny kofehy feno kofehy vita tamin'ny haingon-trano, Hanky ​​513511